Gịnị kpatara Hillier Lake pink? Choputa ihe nzuzo ya niile | Network Meteorology
Ọdọ Mmiri Hillier
Anyị gara Australia ileta ọdọ mmiri ugwu. Ọ bụ ọdọ mmiri pụrụ iche dịka ọ nwere mmiri pinkish. Ọ dị na Middle Isand, agwaetiti dị ihe dị ka kilomita 5 na ọkara nke dị na ndịda Australia. Osimiri ahụ nwere njirimara nke inwe mmiri pink na nke a na-eme ka ọ bụrụ ihe mgbaru ọsọ nke ọtụtụ nyocha sayensị na ọtụtụ asịrị na echiche.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị njirimara niile, ịmata ihe na ihe mere Lake Hillier ji pink.
2 Ọdọ mmiri Hillier
3 Ọdọ Mmiri Hillier Curiosities
Ọ bụ ọdọ nke na-atụle ihe dịka ihe dị ka mita 600 n’ogologo na mita 200 n’obosara. A hụrụ ya n'okirikiri ebumpụta ụwa nke otu agwaetiti dị na ndịda Australia. Okirikiri oke ọhịa nke eucalyptus na malecuca gbara ya gburugburu. Nke a ikpeazụ umu osisi o siri ike onye ọ bụla maara banyere ya na otu onye nwere ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị na-egosi banyere ya. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ na ịntanetị na-ekwu na sayensị enweghị ike ịkọwa agba nke ọdọ a. Ihe a abụghị eziokwu.
A chọpụtara Lake Hillier na 1802 maka njem a maara dị ka Findlers. Njem a mere afọ iri anọ ma otu onye nwetara ọtụtụ ozi gbasara ọdọ mmiri a na-achọ ịmata ihe. N'ime nyocha na nyocha emere n'ime ọdọ ahụ, achọpụtara na nnu jupụtara na ya. Na nnu 340 nke nnu maka lita mmiri ọ bụla. Nke a bụ ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke nnu na liter mmiri. Ume a di ka nke Osimiri Nwụrụ Anwụ. Gburugburu nnu dị na nnu nke na ọ nweghị ike ịkwagide ndụ ọtụtụ anụmanụ. Agbanyeghị, enwere nje bacteria na-emegharị maka ọnọdụ salinity a ma nwee ike ibi na gburugburu ndị a. Fọdụ n’ime nje ndị a ha bụ dunaliella salina na halobacteria.
Nje bacteria a nwere ọtụtụ beta carotene nke na-enyere aka ichebe ha pụọ ​​na radieshon nke ike anyanwụ. Ngwurugwu a na-abata na karọt, skwọsh, na tomato. Na-achọpụtaworị myirịta dị n'etiti akwụkwọ nri ndị a kpọtụrụ aha na agba nke ọdọ Hillier. Ma ọ bụ na a na-eji kemịkal a maka ihe ịchọ mma maka ekele ya. A na-ejikwa ya na ụlọ ọrụ nri maka agba agba maka agba ya. Naturalcha a na-acha odo odo na ọbara ọbara.
Otutu agba nke Lake Hillier sitere na nje ndị a A na-ebu ha ka beta carotenes.
N'aka nke ọzọ anyị na-ahụ halobacteria. Ngwurugwu ndi a a maara dị ka Extremophiles. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ha nwere ike ibi na mmepe nwere ike ime ka ọnọdụ ha dị. N'okwu a, oke ọnọdụ bụ ezigbo nnu nnu na ụzarị ọkụ. Halobacteria ndị a nwere protein a maara dị ka bacterioruberin, nke a na-eji amata ìhè anyanwụ ma mepụta fotoynthesis. Nke a na-acha uhie uhie na agba.
Nke a na - akpata ụdị nje abụọ dị iche iche agwakọtara na na - agwakọta ndò na - acha ọkụ nke dunaliella salina na chaacha acha ọbara ọbara nke halobacteria. A na-agwakọta agba abụọ a iji nye agba pink nke Lake Hillier.
Ọtụtụ mmadụ na-eche na-agbanwe agbanwe nke ọdọ a bụ nke strawberry shakes. Otú ọ dị, ka ị na-abịaru nso ọdọ mmiri ahụ na-amịrị mmiri na ya, ị pụrụ ịhụ ka ọ na-acha ka ọkụ. Pinkcha pink dị njọ karị mgbe ị si na mbara igwe lee ya anya wee hụ ala jupụtara na nnu. Ọ bụ ezie na ọdọ a nwere agba mmiri a na-adịghị ahụkebe, mmiri anaghị egbu egbu ma ọ bụrụ na etinye ya. Ihe kachasị nwere ike ime gị bụ otu ihe ahụ dịka mgbaàmà nke oke osimiri nwere oke nnu.
Ọdọ Mmiri Hillier Curiosities
Ọdọ a dị n’agwaetiti a na-ebighịzi ebi na nke oke ọhịa. Nke a pụtara na ị gaghị enwe ike ihu na ihu ọdọ mmiri dị ebe ahụ. Nanị ụzọ ị ga-esi hụ ọdọ mmiri a bụ site n’ịfefe agwaetiti a na-echekwa na helikọpta si Esperance. Nọmalị njem ndị a dị oke ọnụ, mana ọ bụrụ na ịnwere ike ị nweta ha agaghị echefu echefu.
Ọ bụ ezie na ihe kachasị egosi na agba pink bụ nke anyị kpọtụrụ aha, Enweghị nkwenye sayensị nke nwere ike ịgwa anyị ihe kpatara ya. Ihe anyị maara bụ na oke nnu dị elu dị n'ọdọ mmiri anaghị ekwe ka mmepe nke ndụ dị ka anyị si amata ya ugboro ugboro, otu ederede na-eme ka ihe ndị dị ndụ nwere ike ịlanarị na gburugburu ebe ndị a kwesịrị ịnwe oke ọnọdụ. N'ihi ya, E nwere ụdị ndụ dị iche iche na ụdị ọhụụ dị iche iche karịa ka anyị na-ahụbu.
Otu ihe ahụ bụ maka seabed. Azu dika azu nkpokoro enwetala ihe omimi di otua n’ihi na ha aghaghi ime mgbanwe maka oke nsogbu nke mpaghara mmiri. Nke a bụ ihe kpatara enwere ọdọ mmiri pink.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Lake Hillier.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ọdọ Mmiri Hillier